BreakoutCoin စျေး - အွန်လိုင်း BRK ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BreakoutCoin (BRK)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BreakoutCoin (BRK) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BreakoutCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $98 602.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BreakoutCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BreakoutCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BreakoutCoinBRK သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0112BreakoutCoinBRK သို့ ယူရိုEUR€0.00953BreakoutCoinBRK သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00858BreakoutCoinBRK သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0103BreakoutCoinBRK သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.101BreakoutCoinBRK သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.071BreakoutCoinBRK သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.25BreakoutCoinBRK သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.042BreakoutCoinBRK သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0149BreakoutCoinBRK သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0157BreakoutCoinBRK သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.251BreakoutCoinBRK သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0866BreakoutCoinBRK သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0601BreakoutCoinBRK သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.835BreakoutCoinBRK သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.89BreakoutCoinBRK သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0154BreakoutCoinBRK သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0171BreakoutCoinBRK သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.348BreakoutCoinBRK သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0776BreakoutCoinBRK သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.19BreakoutCoinBRK သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩13.26BreakoutCoinBRK သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦4.34BreakoutCoinBRK သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.822BreakoutCoinBRK သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.31
BreakoutCoinBRK သို့ BitcoinBTC0.000001 BreakoutCoinBRK သို့ EthereumETH0.00003 BreakoutCoinBRK သို့ LitecoinLTC0.000211 BreakoutCoinBRK သို့ DigitalCashDASH0.000131 BreakoutCoinBRK သို့ MoneroXMR0.000131 BreakoutCoinBRK သို့ NxtNXT0.908 BreakoutCoinBRK သို့ Ethereum ClassicETC0.00168 BreakoutCoinBRK သို့ DogecoinDOGE3.29 BreakoutCoinBRK သို့ ZCashZEC0.000143 BreakoutCoinBRK သို့ BitsharesBTS0.434 BreakoutCoinBRK သို့ DigiByteDGB0.38 BreakoutCoinBRK သို့ RippleXRP0.0404 BreakoutCoinBRK သို့ BitcoinDarkBTCD0.000394 BreakoutCoinBRK သို့ PeerCoinPPC0.0375 BreakoutCoinBRK သို့ CraigsCoinCRAIG5.21 BreakoutCoinBRK သို့ BitstakeXBS0.488 BreakoutCoinBRK သို့ PayCoinXPY0.2 BreakoutCoinBRK သို့ ProsperCoinPRC1.44 BreakoutCoinBRK သို့ YbCoinYBC0.000006 BreakoutCoinBRK သို့ DarkKushDANK3.67 BreakoutCoinBRK သို့ GiveCoinGIVE24.75 BreakoutCoinBRK သို့ KoboCoinKOBO2.61 BreakoutCoinBRK သို့ DarkTokenDT0.0103 BreakoutCoinBRK သို့ CETUS CoinCETI33